Umsebenzisi reviews ka-XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion.
Yintoni bethu abasebenzisi ingaba esithi malunga XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion
[email protected] 23.06.2020 ku-22:50
I-website ye-13 rubles ngamnye 1000 iimpawu, umgangatho, isiqinisekiso, uniqueness http://cllic.xyz/xr7
[email protected] 13.02.2020 ku-22:11
[email protected] 01.02.2020 e 7:39
googles 27.03.2019 ku-16:45
googles 26.03.2019 ku 20:37
Denis 20.11.2018 ku-13:53
Puzzled ukukhangela lwenkqubo ukuba eshushu-phezulu abancedisi, yonke into ndafumanisa noba asikwazanga ukungena kwi-parameters kwaye ukusebenza okanye ixabiso. Iselwa nge kunokwenzeka ingozi kwezinye ividiyo ndeva ukuba kukho enjalo lwenkqubo Xheater bought yakhe, kodwa yona intliziyo phandle ukuba abancedisi apho misela mna, ngesizathu esithile hayi zidityanisiwe nkqubo, hayi kakhulu upset ndazithenga u guys iseva ka-x, ibe honest, wathabatha abanye ixesha phambi ezininzi moments kwafuneka guess (umzekelo emva kofako lomncedisi ngomhla apho postmaster, kuya outputted impazamo dkim kwaye dmark kwaye supposedly na inyaniso spelled ngaphandle, ingxaki yayikukuba isonjululwe nje reinstalled i-axle kwaye kwakhona-ifakwe pmta, i-postmaster ummandla akazange isuswe, kwaye emva re-faka pmta ummandla software ayikho iqinisekiswa). Ngoko ke basically i-thambileyo ndinguye ndonwabe kakhulu, ndinqwenela i-guys hayi yeka uphuhliso software. Abo.inkxaso ngu ngokukhawuleza, ulinde ixesha ngexesha esebenza iiyure kusenokuba ngaphantsi a ngomzuzu.
Nicholas 03.11.2018 ku-11:34
I-reviews ndibona abanye esidibanisayo. Thabatha ukuba akunjalo kunabela? Xa Ufuna ukuphendula rudely ukuba umxhasi, apho ucela ngaphezu 2 imibuzo? Xa umxhasi akakwazi kuthetha nayiphi na insulting amazwi, kwaye Umphathi inkxaso elubala lubonisa ukuba umxhasi akukho? Supposedly umxhasi ngu uthetha ngokungathi yena u-a gentleman? La ngamazwi Yakho Umphathi. Xa Ufuna lock wathenga lwenkqubo uvale ukufikelela kubo? Inkqubo ufuna ukuthenga, kodwa akekho emsebenzini, ngenxa bakhululwe inguqulelo entsha kwaye kufuneka kuyihlawula kwakhona nge-50% isaphulelo, kwi end zaphukile kwaye kufuneka uvale yangoku ukufikelela kule ndawo kwaye incoko njalo-njalo? Ewe, Wena wavakalisa-dash kwi-RPN kwaye zonke.
Xa ukhetha iinkqubo ye-imeyili wayenolwazi ukukhetha iinketho eziliqela ka-zephondo. Purely yi-ithuba ndabona udweliso lwenkqubo kwi XSPAMER. Bema yakhe ukhetho kwi kwabo. Zange regretted wam oyikhethileyo. Ndazithenga a misela, apho iqulathe ezine iinkqubo. Inkqubo ezisebenza kwaye dibanisa umbala ngamnye enye, bahlangana bonke kuchazwe iindlela. Constantly igqityiwe. Ngalo mzuzu mna cinga kubo eyona kwiindawo zentengiso. Abo.inkxaso kwi-ephezulu umphakamo, ngoko nangoko siphendule unyango labathengi kwaye anike highly umntu uncedo.Thabatha reviews malunga ezi iinkqubo, ndicinga ukuba, kubonakala ukusuka abo bantu bathe ayiqondwa okanye hayi bafuna ukuqonda. Isoftwe ababhekisi phambili kwaye enzima inkxaso. Ndinqwenela kuwe impumelelo kwi-uphuhliso imisebenzi yabo. Kwiindawo zentengiso responsive kwaye honest iingcali kuba kakhulu abancinane.
Ivan 24.06.2018 ku-17:07
Inkqubo XHeater isebenza kakuhle, bazalwana umsebenzi lwenziwa. Ikhangela a ezimbalwa kunye ummelwane lwenkqubo ye eshushu-phezulu, ndafumanisa lokuqala inkqubo XHeater kwaye threw kuye kwi-Ref. unxulumano kuba oko, lowo esayiniweyo phezulu kwaye wathenga lwenkqubo.
Vyacheslav 30.05.2018 e 2:10
Isoftwe kakhulu elihle, ekumiseleni iiseva ze-e-ephezulu inqanaba ukucwangcisa umncedisi nje nge ufaka PMTA, waba bonke DNS amangeno ukubhalisa ngesandla izixhobo umncedisi wathabatha 20-30 imizuzu, bonke idata Xservers drove kwaye yonke into waya ngokuzenzekelayo ifakwe, kwaye okubaluleke kakhulu, emva ezi izicwangciso unayo nayiphi na oonobumba ngaphandle iingxaki kwi-inboks hamba, isantya volume ingaba kulungile pulls umncedisi kuphila ixesha elide, ukuba echanekileyo lokuposa ukwenza, ndinguye ndaneliseke kakhulu, siyabulela ababhekisi phambili kuba enjalo elihle lwenkqubo, kwaye kakhulu amanyathelo afanelekileyo amaxabiso, ndinga nkqu kuthi ukuba kunzima kakhulu cheap kuba iinkqubo ezinjalo, njengoko ndazithenga uqeqesho kunye izikripthi 10 phinda-phinda ngo ngakumbi expensive, kwaye ezi iziphumo bengengabo, Jikelele, mna recommend, mna absolutely uthando ngayo!
Mohamed Ruziev 15.05.2018 ku-17:23
Ndiya kukuxelela malunga nenkqubo ukuba nje wabetha kum. Ndine ezingabonwayo iinkqubo ezingekho lured ukuba kunye ayo amanye encinci okulungileyo iimpahla kwaye ke wouldn khange sika imali kuba ukuxhasa iinkonzo. Kwi end, zonke waya njengesiqhelo. Akukho "ufikelelo kwincam yoluvo yesondo" ukususela ukuthenga apho. Kodwa ke mna weza kuwo inkqubo Xmailer ukususela guys Elinesoft. Ingaba isithuba!!! Ngoko ke ngubani ukusebenzisa le nkqubo? Kwaye ke ngubani yena ukwenza oko? Zichaza ngenxa. Ukuba unayo iimveliso zabo, kuba kwezabo umxhasi-base kwaye ufuna zithungelana kunye nabo umphefumlo umphefumlo, le nkqubo kokwenu. Kwaye zithungelana intliziyo intliziyo, akukho ngcono indlela kwe-personal iileta. Ngoku pigeons phantse iphaphazela, kwaye I-ka-Russia akukho mcimbi kangakanani balingwe yakho whim ngu izifuno. Kwaye bonke ukubhala iileta ixesha nomzamo ayikho ngokwaneleyo. Ke ukuba kulungile kuthi ukuba kulula email, nto ilula. Apha Kuwe guessed ngayo, kodwa ngaphandle kokuba wenze abathengi neqabane lakho umnwe ukubala. Wabhala, wathumela - linda kuba [iinketho]...) Kwaye ukuba ukhe abaxhasi phezu 1000 !? Ngoko ke, yintoni ukuyenza? Kwaye ke, uyazi ukuba iibhokisi Yakho abathengi, kodwa yakho umthengi ingu ezininzi abanini-mhlaba kwaye supervisors abathi isigqibo sokuba abe yakho sithande incoko okanye hayi!? Le yindlela eyahlukileyo spam amacebo okucoca ulwelo, kuya imida i-yeposi iinkonzo yi-inani shipments. Ngoko bathi ibango ngenxa yakho indawo ekuyo ifayile kwaye unxulumano kwi-imeyili asikwazanga thanda zezahluko ukuba zichaza essence le leta ziqulathe "yima mazwi". Kwaye loo ezithile ingaba yonke imihla ukubonelelwa. Kunjalo, elandelayo iindaba jikelele yakho iimveliso, uyakwazi ngokulula share kwindlela yakho esemthethweni iwebhusayithi kwaye vumelani yakho abathengi kuza kwaye jonga jikelele. Kwaye ukuba Ufuna ukubona oko akunjalo ngoku okanye kamva lo mhla. Awunokwazi get kubo jonga iwebhusayithi Yakho. Personal-imeyili yakho umxhasi kanye ngemini-khangela. Xmailer yakho iindaba ngqo ubeka phantsi nose yakho umxhasi, nokuba zingaphi unayo na yeposi iinkonzo baya kuba iibhokisi. Kuquka zonke iinketho le nkqubo, uza kuba ibhokisi yangaphakathi. Inkqubo iza kukunceda ukubhala iileta, ilungelelanise kwabo beautifully ngoncedo numerous izikhokelo. Unga khangela kanjalo ukuba, ifumene wakho ileta ukuba umamkeli sele evuliweyo umyalezo wakho. Zonke, ngaphezulu kwama-20 elihle izixhobo ibandakanywe le inkqubo eyahlukileyo lwenkqubo. Ukuba ukuya kuqokelela ezi iinkqubo ukuqwalasela lokuposa kwi eyiyeyakhe, inyanga kunye ixesha ukukhangela ayikho ngokwaneleyo. Kwaye ngamnye iqonga ufuna iinkcukacha ezifanelekileyo kwaye namava. Oku inkqubo ngokwenene kushishino isixhobo. Nkqu ukuba unayo nabathengi bonke trouble, yena unikezela Kwakho a ilungile isiseko 2-GIS wakha kuyo. Kufuneka ukhethe ishishini kwaye thumela yakho iziphakamiso. Isoftwe ikuvumela ukuba ahlanganisane enokwenzeka abathengi ukusuka ezahlukeneyo zephondo kwi-u-ucofa, phezulu ukuya loluntu malunga. Zonke ukuba mna anayithathela wabhala Kuwe malunga nale nkqubo, kungoku nje tip ye-iceberg. Ngo bethenga a sephepha-mvume kuba 2900 rubles(kwaba ngakumbi expensive kwe-5000 rubles ), uza kufumana i-incredible isithuba ye-e-mail intengiso. Impendulo!)
Constantine 14.05.2018 ku 20:28
Sebenzisa xdomains kwaye zabo imali ngaphezu kukunceda kakhulu kuyo. Izicwangciso zi-goci,domains, nokuba parses. Tech inkxaso ngu umbane ngokukhawuleza iimpendulo yonke imibuzo. Zonke kakhulu. Ndiyabulela kuba enjalo mmangaliso software.
Ulawulo 26.03.2018 ku-22:47
Apha ke i-inqaku ngomhla wethu uncedo portal ngosuku lomsebenzi licenses kuba zethu software, ukuba utshintshe indlela kwaye ezilahlekileyo yephepha-mvume: https://blog.xspamer.ru/2018/03/24/перенос-и-восстановление-лицензий/ Sinako kuphela unikezelo ezikhoyo yephepha-mvume. Abo baba owenziwe, isiseko le yindlela yentlawulo uqinisekiso kwaye umthengi id ukuba waba esetyenziswa ukwenza iphepha-mvume. Ndiyabulela kuba ukuqonda!
Samvel 26.03.2018 e 0:33
Wathenga lwenkqubo xdomains, kuba umsebenzi wam akuvumelekanga replaceable. Emva reinstalling i-OS sephepha-mvume flew ngaphandle aukubuyisela, kufuneka anike ubungqina intlawulo, mna unako nako ukuqonda njani ukuyenza, kodwa ke ndabona ukuba khangela arrives kwi Yandex i-imeyili, kodwa mna ucocwe kwaye kokuba isebenza nzima ixesha elide ukuze ukuqokelela Bank zemali, khangela amakhadi, njalo-njalo. ukuqinisekisa, uzole owenziwe, kodwa ke kwakhona apparently i-OS reinstalled, kwaye ngoku kwakhona qinisekisa intlawulo kwaye ahlawule 500r. Ngamnye ufumana ezikhuselweyo ukusuka ubuqhetseba, uyazi, kodwa kungcono ukuthumela abantu. isitshixo kwaye usebenzise yona sebenzisa inkqubo independently, njengoko kwenzelwa kwindawo enye wam iinkqubo. Ngoku iyonke inkqubo imali kuba kwaye ayikwazi ukusebenzisa. Kuza kufuneka sithenge entsha.
Stanislav 07.02.2018 ku-18:28
wathenga Xdomains , nje yonke into, ngaphandle ezininzi ixesha nerves kwi-ekubhaleni ithambeka, kuba yokuthenga mna recommend!
Ulawulo 26.01.2018 e 1:45
Impendulo edlulileyo kovavanyo Natalia ukusuka 25.01.2018 22:52 >>Kutheni ukuthenga lwenkqubo xheater wena musa ukunikezela yephepha-mvume isitshixo kwaye sebenzisa inkqubo isuswe Admin: Ngenxa isitshixo enikwe xa ukuthenga ezimbini okanye ngaphezulu iinkqubo, xa ufuna ukuthenga i-iphepha-mvume kuba omnye lwenkqubo, yephepha-mvume ngu owenziwe kumncedisi. >>abo ungakwazi ukubhatala imali kwaye ukuba iimpukane OS kwikhompyutha mna kufuneka kuvavanya nini kwaye njani mna ihlawulwe kuba le nkqubo kwaye ukuba kuthetha ukuba ndinako ukuyisebenzisa ngomhla omnye kuphela ikhompyutha Admin: Imali ka-ezilahlekileyo sephepha-mvume ngu ngokusebenzisa inkxaso kunye ulungiselelo intlawulo uqinisekiso kunye umhla kunye nexesha ndleko ezindala ID apho owenziwe sephepha-mvume kwaye entsha ID apho ufuna unikezelo yephepha-mvume. >>abanye ndifuna lumkisa - ukuthenga lwenkqubo buza malunga yephepha-mvume iqhosha ,mhlawumbi ukuba iphaphazela ngaphandle i-OS okanye ufuna nje wenze isigqibo umsebenzi ekude namathuba wenze oku kuza hayi.... Admin: I-imali umgaqo-nkqubo kuchaziwe ngasentla, incwadi ka-dlulisa yephepha-mvume kuba mna-indawo kwenye ikhompyutha phantsi uncedo->Malunga ne - ->sephepha-mvume ukukhutshelwa. Ayikwazi ukwenza unikezelo independently i-okungenasiphelo inani lamaxesha! Ndiyabulela kuba ingxelo Yakho! Kunye iinkangeleko ezingcono, Elinesoft. Le Projekthi XSpamer.ru
Natalia 25.01.2018 ku-22:52
Ndifuna ukucela ababhekisi phambili ezi iinkqubo - kutheni ukuthenga lwenkqubo xheater wena musa ukunikezela yephepha-mvume isitshixo kwaye yenza ukuba lenkqubo icinyiwe i-okkt ungakwazi ukubhatala imali kwaye ukuba iimpukane OS kwikhompyutha mna kufuneka kuvavanya nini kwaye njani mna ihlawulwe kuba le nkqubo kwaye ukuba kuthetha ukuba ndinako ukuyisebenzisa ngomhla omnye kuphela ikhompyutha, ngenxa yokuba kukho iimeko xa abantu bamele isebenza ekude ukusuka ekhaya kwaye ukuba ngoku wena kuba unikezelo ka-yephepha-mvume KWABANYE.ikhompyutha kufuneka ahlawule 500r .ukubhatala kuwe a sephepha-mvume ingaba wabuza ukunika izitshixo kwaye icace phandle ufuna ukuthenga zezulu hayi wonk ' ubani ithuba sebenza kuphela ikhompyutha .malunga TP kuthi ndivuma engalunganga okanye okulungileyo musa ngoko ke ufuna uncedo oluvela kwabo ayisayi linda .malunga iinkqubo kodwa ndazithenga zonke 4 PCs unako otospitsya kuphela positively ,ukuqonda kwabo lula nkqu for beginners kwaye guys ngokwenene ukwazi zabo umsebenzi .Jikelele inkqubo enkulu , njengoko kuba nam akukho ngcono software kunokuba ezi guys.ngokubhekiselele kuwe .kodwa ndicela ukuba undinike qhosha lwenkqubo xheater nabanye ufuna lumkisa - ukuthenga lwenkqubo buza malunga yephepha-mvume iqhosha ,mhlawumbi ukuba iphaphazela ngaphandle i-OS okanye ufuna nje wenze isigqibo umsebenzi ekude namathuba wenze oku kuza hayi....
Inkqubo ezibalaseleyo, uyakwazi ukuqonda nkqu ngaphandle profound ulwazi kulo mhlaba. Ikuvumela ukuba ukugcina decent isixa-mali uhlahlo-lwabiwo-mali kwi-advertisement, impendulo evela lokuposa ingaba ngenene! Siyabulela kakhulu isoftwe!
Oleg 30.10.2017 ku-13:37
Molo. Inkqubo XMailer na engalunganga kwaye lwempahla ethengiswa - akukho izikhalazo. Kodwa njengoko XHeater ke kukho umsebenzi ukwenza. Okokuqala xa overclocking omtsha ithambeka, 95% ka-email musa nje kuwela yakho spam ulawulo, kwaye zonke i-imeyili iinkonzo le leta ingaba sadlula, ngu isuswe ngaphandle malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza lomyalezo kweenkonzo kwi-nceda linda ngelixa. Ndicinga ukuba isizathu kukuba xa ufuna ukwenza imiyalezo, uyakwazi faka kuphela isihloko, umzimba we email ne ikhonkco (okanye akukho ikhonkco). Nokuhlolwa enjalo imiyalezo e-mail iinkonzo kuquka-antayi-spam iinkonzo njenge: mail-tester.com hardly nika ngcono uqikelelo ngu-phantse ukuya kwi-5, kwaye ziyaziwa ukuba umatshini gun spam. Ukusebenzisa isakhono fakela imifanekiso (kwaye ngoko ke yonke into izawuba kakhulu ngakumbi umdla) ukuba uza significantly yandisa kweenkonzo iileta yokugqibela indawo kwi-dispersal ithambeka.
Sergey 16.10.2017 e 23:15
Bangaphi apha Sergeev phakathi abathengi :). Ingaba Malinga-6 ubudala. Balingwe isisombululo kwi ashicilelwe phantsi kwaye igqityiwe inkqubo (umz Sandblaster). Zonke kuba zabo okuninzi kwaye disadvantages. Ukuba isidima embraced zonke ukuba disadvantages zonke iifayile kwaye vula ngaphandle ke sideways ngomhla uninzi inopportune mzuzu. Kwi-hmailer mna kanti akukho iingxaki zifunyenweyo. Kunokwenzeka iingxaki ingaba kwenzeka ngendlela entle ulwimi ze-Windows, kodwa ababhekisi phambili ukuphendula adequately lokucebisa kwi merits kwaye ulungise phantse yonke into kubhabho. Uyakwazi uyavuma kwi modernization lwenkqubo kuba WENA UBUQU kwaye kuba iselwa sane imali. Ezinjalo mna kodwa akazange kuhlangana nawuphi na omnye phambili. Intlonipho. Jikelele kwaba i-ezibalaseleyo lwenkqubo. Ngenene kakhulu linalo igunya kwaye unusual funkionalnoy. Zombini novice kwaye pros uza indlela 100 %. Ukusebenzisa kuya kufuneka kuba ezisisiseko ukuqonda imigaqo lentengiso mile okanye ezimbalwa lamaxesha rethink zabo isiqhagamshelanisi kwi-YouTube. Mna recommend bonke.
Eugene 17.08.2017 ku-18:07
Inkqubo elungileyo, kunye imisebenzi yayo ukumelana ngokugqibeleleyo. Kwabakho ingxaki kwi-nkqubo, kodwa tech inkxaso kwamnceda ukusombulula.
Anton 01.08.2017 ku-17:43
Ezibalaseleyo inkxaso! Nangona wam iimpazamo, ishumi umphinda-phinde ngo chewed kwaye kwamnceda ukucwangcisa inkqubo.
Alex 18.07.2017 ku-12:50
Kwakhona - enkosi tech inkxaso! Nangona i - "nzima technarchy" indawo (xa isigqibo obvious umsebenzi rests kunye umxhasi
Alexander 10.07.2017 e 2:26
Oku eyona inkqubo ukusuka konke oko kukuthi, iileta khona yonke into ngaphandle kufumaneka kwi-spam, hayi kunzima ukuqonda kwaye nkqu exciting, ngenxa isiphumo soloko elikholisayo. Impumelelo yakho iqela!
Vitaly 11.05.2017 ku-15:53
Kugqitywe ukuba kanjalo shiya siyijonga ukuba babelane yakho amava! Kuba wonke set of iinkqubo ukususela phambili, phambi kokuba uthenge ka-iinkqubo wenza zonke izandla wachitha isiqingatha ngomhla we-ucwangciso kwaye ufakelo ashicilelwe phantsi. Ngoku ezininzi ixesha waba bakhululwe, jonga kuphela analyst kwaye ukuba akunjalo sele ethabatha ezahlukeneyo iintshukumo! Ndinqwenela i-ababhekisi phambili impumelelo kunye nophuhliso kweli icala, njengokuba abathengi ayisasebenzi ezithile ngubani ke engrossed kwi-automation ye-imeyili amaphetshana. Kwaye abo inkxaso ezininzi umonde, ngamanye amaxesha wacela enjalo stupid imibuzo)
Wabuza malunga uphengululo: ezahlukeneyo ukukhangela ka-ukubhala phezu kwayo kwi-XHeater, ngaphandle thumela umsebenzi. Igqityiwe kwi-2 iintsuku. Ndonwabe kakhulu ukuba yonke into finalized kwaye akukho lula unxibelelwano kunye phambili.
Ivan 24.03.2017 e 14:24
Ndifuna Zichaziwe wam umbulelo ukuba iqela tech. inkxaso. Andikho ezikhethekileyo, kwaye alikwazi ukwahlula ngokupheleleyo wam inkangeleko (kwincwadana). Ngoko ke, asingabo bonke subtleties le mbonakalo. Kwaye ngamanye amaxesha mna qinisa. Kwaye inkxaso ngokuphonononga kum. Kuphela namhlanje waziva ngathi olugqityiweyo idiot xa ndiya kuba 1 ngomzuzu wabonisa njani ukuba yonke into isebenza. Kwaye ndaye nto-2 iintsuku. Kakhulu elihle tech. inkxaso. Enkosi guys.
Dmitry 12.03.2017 ku-22:57
Ndifuna ukubulela i-iqela le ndalo. Counterparts ndandidibana, nangona, kwaye ingaba mailings iminyaka emithathu. Andazi njani ixesha elide ziya umxholo xservera, kodwa ke aerobatics. Ngcono kwiindawo zentengiso akhonto kuyo kuba imali kwaye hayi competitive software. Epochta smokes kwi sidelines. Enkosi kwakhona ababhekisi phambili!
Anatoly 09.03.2017 e 2:19
Ndinguye shocked kwiminyaka emithathu edlulileyo amiselweyo kwaye warmed njengoko kunjalo ngoku ebizwa, yakho domains ngesandla. Ngoku epheleleyo automation - ukuba ukusebenza ngu iqinisekiswa - akukho ukuthandabuza - siza bekholelwa mmangaliso.
Eugene 18.02.2017 e 7:52
Siyabulela kakhulu isoftwe. Mna literally imini emva yayo ukuthenga, sele ekusetyenzwe ngaphezu 20K. abantu, ndinazo zonke subtleties asingawo penetrated. Kodwa mna unako ukuthi e-i-imeyili ku kuphumla, endleleni mna siyifumene kakhulu!!!
Artem 03.02.2017 ku-16:22
Inkqubo anamandla kwaye abo babeya kuba lapho kwi-izimvo wathi kwi-inboks ngokuqinisekileyo ke iileta ukuba nabo kakuhle musa khuphela nje umntu.
Uandreya 09.12.2016 e 1:55
Bhala i-guys ababhekisi phambili kwaye enzima inkxaso. a enkulu ndiyabulela kuba ngumsebenzi wabo. Kuqala - nkqubo, apho baye - a ngenene ngenene elihle isixhobo ye-imeyili apha: intengiso. Yesibini - inkxaso ngu eyenzekayo ngexesha kakhulu eziphezulu inqanaba. Ngokukhawuleza, ngokuchanekileyo kwaye icacile. Ukuba usebenzisa i-imeyili apha: intengiso - mna recommend - thatha ukusuka set of iinkqubo - uzakufumana yakho iindleko kakhulu ngokukhawuleza.
Sergey 19.11.2016 e 21:10
Mna ukufunda izimvo, njengoko kusoloko)) kufuneka baqonde ukuba guys - i-yenza ababhekisi phambili revolution Siem imveliso XMailer kunye neenkonzo ezongezelelweyo. Wachitha imali kwaye bought bonke abo banikela, ukuthenga baqonde ukuba investing kuzo uphuhliso projekthi eyona yakhe entsha, ukuphumela bechitha kwi ekhohlo-wing iinkqubo nezikripti njalo-njalo, ukuze Scam. Ukuba ndithi enkosi kwi-ababhekisi phambili akukho nto kuthi. A enkulu enkosi ukusuka kum ubuqu.
Alex 19.11.2016 ku-12:56
Ezilungileyo mini! Ngaba guys kolwalwa - ezimbini unikezelo kunye free inguqulelo (ngaphandle yokuba 60% wokuqala ke qinisa phezulu ngenxa ignorance ka-sinonimayzer) - 80000 rubles ka-net ingeniso. Wathenga olupheleleyo lwe-e a isaphulelo. Siya kuqhuba umsebenzi!
Dmitry 18.10.2016 ku-17:25
Sebenzisa eli qela ixesha elide kwaye bazi guys kakuhle kakhulu, constantly ukwenza iziphakamiso malunga gama, abaninzi sele lwenkqubo. Ukubulela kwabo kuba oko. Ne-advent ka-complex iinkqubo kwi ufakelo umncedisi, yazisa i-imeyili kwaba lula kakhulu. I ibhokisi yangaphakathi uza kukuxelela ukuba kufuneka athathele constantly ukuthumela, kwimeko betha kwi-spam ukuya kuthabatha inyathelo, kodwa oku ngokulula kwenzeka ukuba unengxaki intloko. Ndazise wonke umntu hayi kuba lazy, ukuqonda kwaye kubaxhakamfula i-imeyili apha: unikezelo, izibhengezo, cheaper akwenzeki.
Uandreya 18.10.2016 ku-16:32
M izandla siyavumelana, nje ngowe-3 spamer namhlanje akukho nto ixesha elide afanelekileyo. Amacebo okucoca ukuphuhlisa iiyure kwaye ukugcina phezulu kunye nabo nzima. Inkqubo elula njengoko 3 ezisithoba, kukho ubunzima malunga hayi uthetha. Ukusebenza otyebileyo kodwa zryashnoe. Kwi-ibhokisi yangaphakathi ayikho ngaphezu 3% kwi-imposiso-40% okanye ngaphezulu. Ezinzima spamming ayizukusebenza 100 unit-format, kodwa abancinane izinto, njenge-imeyili zabo com.iziphakamiso kuba iqaqobana iidilesi zinokwenzeka. Abo.inkxaso stremnovato, thumela nje kwi-Skype, kodwa ukuphendula ngoko nangoko. Into efana nale
Fyodor 12.10.2016 ku-12:24
zonke reviews ingaba ezithengiweyo, kodwa inkqubo sucks. hayi iyasebenza
Ivan 27.09.2016 e 2:08
Molo,wathenga inkqubo kwaye xservers xspammer a ezimbalwa zidlulileyo,ndaneliseke kakhulu! otyebileyo ukusebenza,Ngaphambili basebenza i-script, mailwizz ngoku iza kuphela umsebenzi kunye xspammer, tech inkxaso rhoqo kwi-udibaniso,Jikelele, zonke ndonwabe kakhulu!-) Enkosi
Master 19.09.2016 ku-18:39
Olukhulu lwenkqubo, ndiza nani kwi computer yakho ukusukela ngo-1993, kwaye ingabi kuphela ebone ezahlukeneyo, balingwe ukusuka ekuqaleni. Eli qela yi enkulu gracefulness kuba Amazing Umsebenzi Kuba Izandla Ukuze Zikhule Ukusuka Apho!!!!!!!!!!!! Siyabulela guys kuba yakho mkhulu!!!!
Nicholas 18.09.2016 e 1:38
Ukuba izandla ukukhula hayi ukusuka kuloo ndawo, ngoko le nkqubo ayiyi kuba Kuni.
Igor 13.09.2016 e 9:53
Abaziqondi lwenkqubo. Andinaku uvavanyo kuyo. Wadala ileta wathumela kuye, kodwa ileta waya. Kufuneka ahlawule 5000 RUB. ukukhangela umsebenzi lwenkqubo. Yintoni nonsense!!!!
Igor 03.09.2016 e-19:00
Wawo izakhono xSpamer amagqabi ukuza kuthi ga ngoku, emva abaninzi yayo competitors - banako kuphela swallow eluthulini... Mna uzamile numerous iinkqubo nezikripti ukuthumela i-imeyili, kodwa bema ngokuqinisekileyo xSpamer. Ngu real zidibane! Kwi convenient kwaye elula ujongano eboniswe zonke ukususela thematic isiseko sedata ukuba uvalo ikhompyutha emva ekhutshwe unikezelo. Iindlela ka-randomization kwayo yonke into kwaye i-email waza wagqitywa, kwaye headers, kwaye uhlobo umthumeli, kwaye amakhonkco, kwaye abaninzi kuphumla - vumelani unikalizirovat WONKE kwileta amakhulu amawaka! Eyakhelwe-ngaphakathi blacklist ezimbini iintlobo (imigaqo kuba specifics), ukukhangela ezikhoyo domains kuba ithumela iiseva... Andithethi ngokushumayela ukuba eyakhelwe-ngaphakathi umyalelo wokhuselo ukususela angenaluvo iintshukumo lomsebenzisi, surprises kwi-ukuthumela abancedisi, kwaye nkqu iingxaki Internet unxulumano! Kwaye creators ingaba constantly nokuza phezulu kunye nokuphumeza entsha kwaye entsha kubo bonke ubomi bakhe! Kwaye kukho foram apho unako ukubonisana associates...
George 05.05.2016 ku-16:51
Inkqubo Xspamer iluncedo kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Kwaye iqela Super. Siyabulela kubo bonke abahlobo omkhulu
Yulia Sokolova 11.03.2016 e 21:55
Oku eyona lwenkqubo ye-imeyili apha: intengiso campaigns namhlanje - kwaye ndiza na yena ngu kwaye iya kuhlala eyona njengoko baya wongeza ukubonelelwa entsha kubo bonke ubomi bakhe. Ngaphezu koko, usebenzisa iimpawu lwenkqubo musa kufuneka ride kwi ezahlukeneyo nezinye izixhobo zokusebenza - kokuba wenze yonke into: i-akhawunti ye-uluhlu lokuposa (ukuba akunjalo usebenzisa zabo SMTP iiseva), kwaye izixhobo kuba ubukhulu randomization, kwaye i-unlimited inani HTML izikhokelo ( ukuba ufuna ukuthumela colorful iileta kwaye hayi nje usebenzisa ecacileyo-umbhalo umhleli). Ngokunjalo ilanlekile oluninzi bypass i-spam amacebo. Kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba inkqubo unako mfundisi nkqu beginners ukuba earn imali kwi-Intanethi njengoko free ukufikelela phezulu kakhulu umgangatho free inyathelo lesi-ngo-inyathelo lesi-kunjalo, kunye uninzi eshwankathelweyo, oluneenkcukacha ividiyo izifundo kwi besebenza inkqubo ukusuka engundoqo guerrilla Guerrilla Intengiso. ( Kwi Poparte enjalo kunjalo izakuba kwindawo kukhokela). Njengoko i umqali ukuba earn-intanethi kufuneka kuqala kwaye foremost traffic yakho projekthi ulwazi-imveliso, a marketable imveliso. Kwaye kuphela lwenkqubo Spamer uza uncedo kuye ezingaqhelekanga neendlela zobuchwepheshe yakhe umrhumo isiseko kuba free ( zonke ezinye iinketho kufuna enkulu otyalo-mali). Ngokwaneleyo ukuba ahlawule 1000 rubles kuba yephepha-mvume lokufumana zonke izixhobo - kodwa ke kuya kukunceda kakhulu. Kwaye ukuba ke, asingabo bonke: inkqubo mkhwa umdla kwaye gipsey 2 u-tier affiliate lwenkqubo. Ukunxulumana ngakumbi kwaye ukukhula kunye nathi!
Ilya 06.03.2016 ku-18:27
Molo zonke. Endinako ngaphezulu kwama-30 iintlobo ezininzi ezonakeleyo traffic, kodwa asoloko bothered yi-eyokuba-imeyili apha: intengiso ndim. Wathenga iqelana ze computer, ashicilelwe phantsi. Lowo ufakwe kwaye kwenkqubo ye-smtp kwi VDS. Kwakhona i ibhokisi yangaphakathi ubani ubukhulu 1-2%. Emva intlanganiso kunye xspammer kwaye nge-personal iintlanganiso zokubonisana kunye holders inkonzo provds ekugqibeleni onayo inboks 30%. Isiphumo ngu ukwanda nge-15 umphinda-phinde ngo!!!! Ndifuna ukuqonda indlela jikelezisa umbhalo, yintoni kwaye kangakanani kufuneka umntu onegunya lokusebenzela omnye, yintoni izicwangciso ingaba firing-antayi spam yeposi njani ukuze uphephe kwabo. Super. Ngoku wam Arsenal 31 isixhobo ka-Internet intengiso. Ingaba recommend. Ngo indlela ihlawulwe inguqulelo isoftwe ukuthengwa smtp ihlawulwe ngaphandle kwi-kanye ngeveki. Kanjalo enkosi eyakhelwe-ngaphakathi kwi-database 2gis kwi-nkqubo ngokwawo.
Oleg Ерофеев 14.02.2016 e 0:15
Mna ukufunda izimvo ngasentla kwaye kunzima ukusebenza ngokupheleleyo umi kunye Eugene, abanye apparently abanalo balingwe ukusebenza kunye ngenene complex iinkqubo. Ubuqu, mna lula ngakumbi lwempahla ethengiswa ezingabonwayo kwaye balingwe a dozen ka-iinkonzo zonxibelelwano kwaye iinkqubo. Ndinqwenela kuwe nempumelelo kwabo kwaye wathi rhoqo ukuphuhlisa ukusebenza kwi-inyathelo kunye umphinda-phinde ngo!
SEOBoss 11.01.2016 ku-16:36
Sebenzisa Xspamer kuba unikezelo yalo database ne-1000-imeyili), Ngokwaneleyo yovavanyo inguqulelo. Zonke nje ezibekwe ngaphandle ngoko nangoko. Ezilungileyo comment yakho iqela. Ukuphuhlisa le projekthi!
Sergey Викторович 14.12.2015 ku-13:19
Ewe, ndiya kuvuma, inkqubo hayi ilula, kodwa mna constantly zithungelana kunye enzima inkxaso Umphathi, yandixelela ngu ingcebiso kwaye mna anayithathela sele pretty kakuhle lento Issamerm. Kusetyenziswa le nkqubo ixesha elide, ukususela yesibini inguqulelo, ngoku besiya wesithathu, apho kubalulekile wongeza ezininzi kuluncedo imisebenzi kum. Jikelele, zonke ndonwabe, balingwe ukufumana iinkqubo ezininzi, kodwa bonke oonobumba bakholisa ukuba bawele spam, kodwa ngoncedo exsphere wathumela ngempumelelo, ngoku mna onayo zonke iinkcukacha kwaye unako ngokusesikweni kwincwadana. Izicwangciso, kwaye appropriately ngokwaneleyo imisebenzi!
Samkele 08.12.2015 e 14:06
Olukhulu programm. Izicwangciso enzima. Nceda wenze njengoko elula kangangoko kunokwenzeka izicwangciso kwaye ukuba into efana "ingcali" indlela.
Shiya yakho ingxelo malunga XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion
Zethu iingcebiso wokwenza umgangatho-imeyili apha amaphetshana.
Innovations kwi-XMailer i-3.0. Indlela ukutsiba qala kwincwadana? Impendulo apha.
Zethu iingcebiso wokwenza umgangatho-imeyili apha amaphetshana
Innovations kwi-XMailer i-3.0. Indlela ukutsiba qala kwincwadana? Impendulo apha